nepali First time sex sex story - Indian Girls Nude XXX Images
nepali First time sex sex story
Nepali First time sex sex story frist time sex story in nepali,frist time sex kahani,frist time chikeko kahani,frist time chikeko story,nepali kt frist time chikeko,bhauju lai frist time chikeko,baini sanga frist time chikeko
तसलिमा नसरिन मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो । तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र ! रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुुमति देलान् र ! अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरेँ । ‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ । ढाका पुग्नेबित्तिकै ‘एकजना साथीलाई ढाका विश्वविद्यालयको होस्टेलमा भेट्न जान्छु’ भन्दै सान्दाइको कोठाबाट हिँडेँ । र, सीधै रुद्रको कोठा गएँ । तर, रुद्र खुसी भएन । खुसीमा उपि|mनु वा पीडामा आँसु झार्नु रुद्रका लागि असम्भवप्रायः थियो । शिरदेखि पाउसम्म ऊ रूखको ठुटोजस्तै थियो । ऊ आफ्ना अनुभूति बाहिर देखाउँदैनथ्यो । रुद्रले मलाई साडी लगाउन दियो । सेतो साडीमा स-साना फूलका बुट्टा थिए । पेटीकोट र ब्लाउज पनि साडीसँग मिल्ने थिए । रुद्रकी बहिनी विठीले छानेकी थिई यो साडी । रुद्र आफैँले मलाई साडी छानेर कहिल्यै दिएको थिएन । पहिले उसले दिएको हरियो सुती साडी पनि उसकी साथी मुक्तिलाई छान्न लगाएको थियो । मचाहिँ रुद्रलाई जन्मदिनमा दिने उपहार आफैँ छानेर किन्थेँ । कुन रङको सर्टसँग कुन रङको पेन्ट मिल्छ, म आफैँ छान्थेँ । अरूलाई साडी छान्न लगाउँदा रुद्र मेरो रूपरंगबारेमा भन्ने गथ्र्याे, ‘अलि कालीखालको केटीलाई जुन सुहाउँछ, त्यही ।’ रुद्रले मुक्ति र विठी दुवैलाई हाम्राे गुप्त बिहेबारेमा भनेको रहेछ । त्यो रात उसले मलाई चाइनिज रेस्टुरेन्ट लिएर गयो । खाना खाएर हामी फर्कियौँ । मैले हाम्रो बिहेबारेमा कसैलाई बताएकी थिइनँ । रुद्रचाहिँ बिस्तारै सबै मान्छेलाई बताउन थालिसकेको थियो । त्यो रात मैले रुद्रकोमा बस्नुपर्ने भयो । तर, मैले जानुपर्ने थियो । सान्दाइलाई एक घन्टामा आउँछु भनेर हिँडेकी थिएँ । सान्दाइकोमा जान खोज्दा रुद्रले भन्यो, ‘दाइकोमा जाने कुरा नगर । तिमी मेरी श्रीमती हौ । यही नै तिम्राे सबभन्दा ठूलो परिचय हो ।’ ‘तर, यो परिचयले म अहिले बाँचेको जिन्दगी बाँच्न सक्दिनँ ।’ ‘तिमी अवश्य सक्छौ ।’ ‘तर, मैले सान्दाइलाई आफू झुनू सानिमाकोमा थिएँ भनेर झुट बोल्नुपर्छ ।’ ‘त्यसो भए पीर नगर । म झुनू सानिमालाई कुरो मिलाउन आग्रह गर्छु ।’ ‘तर, सानिमा माल्लिन् र ?’ ‘किन नमान्नु ? मैले सकेको गर्छु ।’ त्यो रात मैले रुद्रसँग बिताउनै पर्ने भयो । यो रुद्रको माग, आदेश, आग्रह, इच्छा, सबै थियो । रुद्रले भन्यो, ‘आज तिमी मलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिन्छ ।’ ‘सम्पूर्ण भन्नाले….’ ‘सम्पूर्ण भनेको सम्पूर्ण । पछिका लागि केही बाँकी नराखी …..।’ यसको अर्थ बुझेर मेरो मुटु हल्लियो । मैले गलत गरिरहेको छैन भनेर आफूलाई आश्वस्त पार्न खोजेँ । वैधानिक रूपमै म आफ्नो लोग्नेसँग रात बिताउन गइरहेकी थिएँ । मेरै उमेरकी हसिना त त्यसो गर्न सक्छे भने मचाहिँ किन सक्दिनँ त ? मेरै कक्षाकी मन्दिराले पनि सहपाठी सौकतसँग गोप्य बिहे गरेकी थिई । ऊ पनि सौकतको कोठामा गएर रात बिताउँछे भन्ने हल्ला चलेको थियो । अन्त्यमा त्यो रात आयो । रुद्रले मलाई उसको कोठामा लग्यो । सर्ट, पाइन्ट खोलेर लुंगी मात्रै बेर्‍यो र बत्ती निभायो । त्यसपछि मलाई बोकेर ओछयानमा लगेर पल्टायो । म मनमनै भनिरहेकी थिएँ, ‘अब तेरो बिहे भइसक्यो । बिहेपछि लोग्नेसँग सुत्नुपर्छ । तैँले सुत्नैपर्छ । सबै केटीको नियति यही हो ।’ सडक-बत्तीको उज्यालो झयालबाट भित्र पसिरहेको थियो । मलाई त्यो उज्यालो चन्द्रमाको प्रकाशजस्तो लाग्यो । म रुद्रलाई माया गर्थें । ऊ मेरो लोग्ने थियो । रुद्रतिर ढाड फर्काएर एकैपोको परेर पल्टिएँ म । मेरो गुडुल्किएको शरीरलाई रुद्रले आफूतिर तान्यो । म होइन, खाली मेरो प्राणविहीन शरीरमात्र रुद्रको अँगालोमा बेरियो । मेरा हात छातीमा लपक्कै टाँसिए । रुद्रले निकै बल गरेर छातीबाट मेरो हात हटायो । म काँपिरहेकी थिएँ । रुदले मेरो ओठमा गहिरो चुम्बन गर्‍यो । मेरो ओठ बाक्लो र गह्रौँ भएजस्तो लाग्यो । नचाहँदा-नचाहँदै पनि म रुद्रलाई जोडजोडले धकेलिरहेको थिएँ । रुद्रले एक हातले मेरो ब्लाउजको टाँक खोल्यो । उसको ओसिलो जिब्रो मेरो छातीमा चलमलाउन थाल्यो । अस्तव्यस्त साडीमा अल्भिएर म उसको अँगालोमा निस्सासिरहेँ । ‘हेर केटी, आफ्नो लोग्नेले भनेअनुसार गर । खुट्टा फाडेर राख । यही नै त हो तरिका !’ मैले आफूलाई बारम्बार यसो भनिरहेँ । त्यसपछि मैले पूरै शरीर छाडिदिएँ । आँखा चिम्लँदै म आफू त्यहाँ नभएको परिकल्पना गरँे । ‘यो मेरो शरीर होइन । यहाँ जे-जस्तोे अश्लील काम भइरहेको छ, त्यसमा म पटक्कै संलग्न छैन । यो म होइन । यो अरू कसैको शरीर हो,’ म यस्तै-यस्तै सोचिरहेकी थिएँ । त्यसपछि रुद्र ममाथि उक्लियो । अब मेरो आँखामात्रै होइन, सासै बन्द भयो । तैपनि, यसलाई मैले आफ्नै लोग्नेले गरेको स्वाभाविक प्रक्रिया भनेर चित्त बुझाउन खोजेँ । तर, मेरो यो मनचिन्ते विचारको प्रक्रियालाई तोडेर घाँटीबाट चिच्चाहट निस्कियो । रुद्रले दुवै हातले मेरो मुख बन्द गरिदियो । मलाई असहय पीडा भयो । रातभर रुद्रले हरेक तरिका अपनायो । सामान्य रूपमा अपनाइने सबै विधि अपनायो, तर हरेकपटक रातलाई चिर्दै ऐआ….. मरँे भनेर म चिच्चाउन छाडिनँ । प्रत्येकपटक मेरो चित्कारलाई रोक्न रुद्रले मेरो मुख थुन्नु पर्‍यो । जब यो कहालिलाग्दो रात सकियो, थकित मैले साडी फेरेर कुर्ता-सुरुवाल लगाउँदै भनेँ, ‘म जान्छु ।’ मुन्टो निहुर्‍याउँदै आँखा झुकाउँदै मेरो बेकामे शरीर लिएर म टाढा जान चाहन्थेँ । रातको डर, लाज र घिनले बिहान पनि मलाई छाडेन । अपराधबोध पनि भयो मलाई । रुद्र मलाई ‘रुद्र’ जस्तै लाग्यो । मेरो लोग्नेजस्तो कति पनि लागेन । घर छिर्ने वेला बाटोमा उसले भन्यो, ‘राति नाटक नगरेकी भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ त्यसबाहेक उसले केही भनेन । न त मैले नै केही भनेँ । म रातिको घटनालाई सम्भिएर चुपचाप बसेँ । त्यो सबको साटो बरु रातभरि पढेर, गफ गरेर, कविता वाचन गरेर वा निश्चल चुम्बनमात्रै गरेर बसेको भए ! बिहान सान्दाइको कोठामा पुगेर मैले काँपेको स्वरमा भने, ‘म झुनू सानिमाको कोठामा रोकेया हलमा थिएँ ।’ ‘झुनू सानिमा आजकल त्यहाँ बस्दिनन्,’ सान्दाइले भन्नुभयो । बिहेपछि सानिमाका बूढाबूढीले विश्वविद्यालयकै घरमा एउटा कोठा भाडा लिएर बस्न थालेको सान्दाइलाई थाहा थियो । ‘हिजो त्यहाँ आएकी थिइन् ।’ ‘अझै कोठा छाडेकी रहिनछन् ?’ ‘अहँ ।’ ‘हँ.. अनि तेरो साथीलाई भेटिस् त ?’ ‘अ भेटेँ ।’ ‘नाम के हो त्यसको ?’ ‘नदिरा ।’ ‘रामकृष्ण मिसन रोडकी केटी होइन त्यो ?’ ‘हो ।’ ‘अनि त्यो त जहाँगिर नगरमा पढ्छे भनेकी हैन र तैँले ?’ ‘हिजो ऊ पनि आश्मालाई भेट्न रोकेया हल आएकी थिई । ऊ पनि राति त्यहीँ बसी ।’ ‘को आश्मा ? हासिमुद्दिनकी छोरी ?’ ‘हो ।’ ‘ऊ पनि ढाका विश्वविद्यालयमा पढ्छे ?’ ‘अँ, हो ।’ ‘तँ त तेरो सर्टिफिकेट लिन आएकी होइन ?’ ‘अँ लिन्छु ।’ त्यसपछि म सरासर भित्र गएँ र ओछयानमा पल्टिएर रातिको डरलाग्दो त्रासदी सम्भिmएँ । त्यो रात ! मैले नाटक गरेको भन्यो रुद्रले । के त्यो स्वाङ थियो त ? आफ्नो स्वाभिमानमा चोट लागेको महसुस भयो मलाई । म बिस्तारै रोएँ । मेरो पूरै जिउ थिलथिल भयो । मानौंँ म भर्खरै सिंहको ओडारबाट फर्किएकी हुँ । हिँड्दा पनि कम्मर दुख्न थाल्यो । पीडाले गर्दा मैले राम्रोसँग पिसाब फेर्न पनि सकिनँ । आफ्नोे स्तन पनि ढुंगाको थुप्रोजस्तो लाग्यो । उसको चुम्बनको दाग बिस्तारै हरायो । मैले बिहेको कागजातमा सही गरेदेखि नै रुद्रले एकरात सँगै बिताउने कुरा गरिरहेको थियो । तर, बिहेभन्दा अगाडि पनि उसले मलाई कम गिजोलेको थिएन । प्रत्येकपटक भेट्दाखेरी रुद्र मलाई चुम्बन गर्न र छातीमा हात राख्न झम्टिहाल्थ्यो । तर, मैले आफूलाई बचाउन सकेकी थिएँ । मसुदको घरमा हामीलाई बस्न दिइएन । यही कारणले रुद्र मसँग निकै समय रुष्ट भएको थियो । मसँग एकरात बिताउनु उसका लागि किन यति अमूल्य हो ? मैले कहिल्यै बुझ्न सकेकी थिइनँ । मैले उसलाई प्रतीक्षा गर्न आग्रह पनि गरेकी थिएँ । पर्खाइको पीडाको प्रतिफल पनि राम्रै हुन्थ्यो होला । तर, रुद्र पर्खिनेवाला थिएन । पर्खाइमा मजा छैन भन्थ्यो ऊ । म ‘आऊ, माया गरौँ’ भन्थेँ, ऊ ‘आऊ, सुतौँ’ भन्थ्यो । रुद्र भोको भिखारीको व्यवहार गथ्र्यो । ऊ सबै कुरो आजै चाहन्थ्यो, अहिल्यै चाहन्थ्यो । मयमनसिंह आउँदा ऊ एकान्तखालको प्ा्राइभेट कोठाको खोजीमा बौलाहाझैँ लाग्थ्यो । मैले खोज्न सक्ने स्थिति थिएन । तर पनि ऊ मसँग रिसाउँथ्यो । कुनै पनि हालतमा ऊ मसँग एकरात बिताउन चाहन्थ्यो । यसरी एकरात बिताइयो, त्रासदीपूर्ण रात । मेरो जीवनमा यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिइनँ । मेरो मन दुख्यो । रुद्रलाई धकेलेर हुत्याउन चाहेकी थिएँ । तर, त्यसो गर्न सकिनँ । म अपांगसरी भएँ । त्यही कागजको अगाडि म हारेँ । त्यस हस्ताक्षरको अगाडि म पराजित भएँ । किनभने, त्यही हस्ताक्षरको मतलब नै विवाह थियो । तर, म रुद्रलाई माया गर्थें । मैले सोचेँ- मेरो सोच र विचारले मलाई एकैसेकेन्ड पनि चैनपूर्वक बस्न दिएन । मैले सान्दाइसँग झुट बोलेँ । सान्दाइले म सानिमासँगै सुतेकी होली भन्ने पत्याउनुभयो होला । तर, सान्दाइले के सोच्नुभयो होला, कसलाई थाहा ? तर, उहाँ मलाई आफ्नो आँखाबाट ओझेल पार्न चाहनुहुन्नथ्यो । त्यतिमात्रै होइन, मेरो साथीसँग भेट्न पनि मलाई एक्लै पठाउनुहुन्नथ्यो । सान्दाइले भोलिपल्ट मलाई आफै रजिष्ट्रारको कार्यालय लगेर सर्टिफिकेट निकालिदिनुभयो । दुई दिनपछाडि फेरि उहाँले मलाई मयमनसिंह ल्याएर छाडिदिनुभयो ।
रुद्रले पछि मलाई भन्यो, ‘तिमी मलाई पूरा विश्वास गर्दिनौ । तिम्रो मनमा अझै शंका छ ।’ उसका कुरा सुनेर मलाई साह्रै दुःख लाग्यो । मैले म उसलाई माया र विश्वास गर्छु भनेँ । मायामा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विश्वासको हो । यो विश्वासको डोरी अलिकति कमजोर भयो भने माया गरिँदैन । मनमात्र पराइन्छ । रुद्रले एउटा चिट्ठीमा लेखेको थियो, ‘के म त्यस्तो अभागी हो, जसले सबै कुरा बलजफ्ती ठीक पार्नुपर्छ ?’ यस घटनाको वर्ष दिनपछाडि रुद्रले लेख्यो, ‘प्यारी अर्धाङ्गिनी, त्यस रात के भयो थाहा छ तिमीलाई ? पहिलोपटक तिमीलाई साडीमा देख्दा तिमीलाई एकदम भिन्न पाएँ । नयाँ मान्छेजस्तै । विगतमा मैले तिम्रो अरू नै चीज मन पराएको थिएँ । तर, यो पटक फरक छ । एकदमै अन्जानखालको आनन्द ! हाम्रो प्रेम नै भर्खर सुरु भएझैँ लाग्यो । यस्तो लाग्यो- पहिले रिहर्सलमात्र थियो । आजचाहिँ रंगमञ्चमा मञ्चन गर्दै छौँ । विगत डेढ वर्षमा रुद्र दुई-तीन महिनाको अन्तरालमा मयमनसिंह आइरहयो । मैले उसलाई सम्बोधन नगरेकाले रिसले गर्दा उसले पनि मलाई सम्बोधन नगरीकन पत्र पठायो । हाम्रो समय प्रेस क्लबको क्यान्टिनमा बित्थ्यो । क्यान्टिनबाट निस्कनुपर्दा हामी उपयुक्त स्थानको खोजीमा यताउति भौँतारिन्थ्यौँ । तर, सदाझैँ ठाउँ पाउन मेरा लागि असम्भव थियो । रुद्रको अनुरोधमा मैले साडी लगाएर उसलाई भेट्न गएँ । मलाई साडी लगाउन राम्रोसँग आउँदैनथ्यो । यास्मिनको सहयोगमा आमाको साडी लगाएर म साथीको जन्मदिन छ भनेर घरबाट हिँडेँ । त्यो दिन अलि एकान्तको फाइदा उठाउँदै रुद्रले मलाई दुई-तीनपटक चुम्बन गर्‍यो र छातीमा हात मुसार्न भ्यायो । घर फर्किएर उसले लेखेको चिट्ठी यस्तो थियो- ‘तिमी आफैँलाई देखेर हाँसिरहेकी हौली, हैन त ? वास्तवमा मलाई पनि हाम्रो प्रेम भर्खर सुरु भएझैँ लाग्यो । यत्रो वर्षसम्म हामीले एक-अर्कालाई खालि स्पर्शमात्र गरेका थियौँ । आज एक-अर्काको शरीरको …पनि महसुस गर्‍यौँ । एक-अर्काको मुटुको धड्कन सुन्यौँ । आज यस्तो लाग्यो, म कहिल्यै पनि यति सन्तुष्ट भएर तिमीसँग छुट्टएिको थिइनँ । तिमी बिस्तारै अनौपचारिक भएर खुल्न थाल्यौ । अब म नौलो संसारलाई चिन्न सक्ने भएझैँ लाग्यो । अब तिमी अझ बढी स्व्ााभाविक भएर खुल्नेछौ, अझ स्वतन्त्र हुनेछौ । हाम्रोभन्दा राम्रो प्रेमको घर अरु कसैकोे हुने छैन । तिमी हेरी मात्र राख मेरी पि्रय लक्ष्मी, अब मलाई अलिकति माया गर । हैन-हैन, त्यतातिर मुन्टो नबटार न, मेरा आँखामा हेर त, लजाउनुपर्ने कुरा के छ र ? तिमीले पहिलेदेखि नै चिनेकै मान्छे त हुँ नि म । यी आँखा, यी परेली, यो निधार, यो मुहार र शरीरलाई तिमीले थुप्रैपटक स्पर्श गरेकी छौ । अनि किन लजाउनु ? मलाई चुम्बन गर, आऊ मलाई माया गर । बिस्तारै-बिस्तारै म आफूलाई नियन्त्रण गर्छु । यदि यही तरिकाले तिमीले मलाई अलि-अलि माया दिन थाल्यौ भने तिमीले देख्नेछौ- म कसरी तिम्रो चाहना बन्नेछु अर्थात् तिमी मेरी बन्नेछौ । वास्तवमा माया भनेको दुई मुटु एक हुनु त हो नि, मलाई सडकमा उभिएर सबैलाई चिच्याउँदै सुनाउन मन छ- ए मान्छे सबैजना सुन । मैले माया गर्ने मान्छे भेट्टाएँ । हामी एकै भयौँ । राम्ररी बस पि्रय । मेरो जीवन, आफ्नो ख्याल गर । तिम्रो रुद्र । प्रस्तुत स्मृति नसरिनको वाइल्ड विन्ड नामक पुस्तकबाट विकास बस्नेतले अनुवाद गरेका हुन्
← sanima ko puti chikeko kahani (nepali sex stories)	hostel mah chikeko katha →